Trondro Koi, tatoazy misy dikany sy angano, fantatrao ve izany? | Ny fanaovana tatoazy
Tatoa trondro Koi: dikany, tantara ary galeriana
Antonio Fdez | | tombokavatsa, Tattoo atsinanana
Ahoana ny fomba hanazavana ny maha-zava-dehibe ny tatoazy trondro koi ao anatin'ny tontolon'ny tatoazy? Ny marina, raha tsy mila mitanisa tatoazy vitsivitsy isika izay nanampy bebe kokoa hampalaza sy hanaparitaka an'ity zavakanto vatana ity, ny tatoazy Japoney, ary indrindra indrindra fa ny koi dia iray amin'ireo. Ary ampy ny manao fanadihadiana kely amin'ny Internet hahafantarana ny lazan'ny tatoazy trondro koi eo amin'ireo mpankafy ny tontolon'ny tatoazy.
1 Legend ny trondro Koi
2 Inona no dikan'ny tatoazy Koi Fish ary tandindona mifanaraka amin'ny loko?
3 Atambaro ny tatoazy trondro koi amin'ny singa hafa na mamorona endrika
4 Koi Fish Tattoo Photos
Legend ny trondro Koi
fa, Inona no dikany sy tandindon'ny tatoazy trondro koi? Ilay trondro koi (na karpa) dia manana tandindona tena lalina sy miely amin'ny kolontsaina Azia izay, nandritra ny taona maro, dia nanondrana tany Andrefana izahay. Concretely kokoa, Tokony hasongadintsika fa izy io dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny angano sinoa. Ary io dia, araka ny angano, io trondro io dia afaka niakatra ny fantson'ny renirano Yellow (any Chine) ary namakivaky ny riandrano goavambe iray.
Ny valisoa tamin'ny fiezahany azon'ity trondro ity dia ny tonga dragona, izay no mahatonga ity karpa ity hanana endrika mitovy amin'ny an'ireo zavaboary angano ireo. Mazava ho azy fa miresaka momba ny morfolojia sy ny lokon'ny mizana izy ireo. Nandritra ny taonjato faha-XNUMX dia nanomboka nanarato trondro koi ireo mpamboly vary any Sina ary niampita ireo karazan-karazany, fomba fanao izay niteraka karazan-karazany maro samy hafa loko.
Na izany aza, tsy azontsika atao ny miala amin'ny maha-zava-dehibe ny fiompiana koi carp koa ho an'ny kolontsaina japoney, fantatra amin'ny firenena ny masoandro miposaka amin'ny "Nishikigoi" (firavaka velona). Taorian'ny am-polony taona maro, Ireo trondro ireo, izay mariky ny kolontsaina aziatika, dia nahazo toerana malalaka tao anatin'ny tontolon'ny tombokavatsa, satria izy ireo dia famolavolana tena miverimberina, noho ny dikany, izay mifandray hatrany amin'ny antony hanatsarana ny tena sy ny fahatsapan-tena.
Inona no dikan'ny tatoazy Koi Fish ary tandindona mifanaraka amin'ny loko?
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny tatoazy trondro koi dia mifandray amin'ny fandresena olana isan-karazany izay atrehantsika mandritra ny androm-piainantsika, ary koa ny toetra maha-izy azy. Mpizara iray izay manoratra anao dia manana tombokavatsa trondro koi amin'ny sandriny havia ary ny marina dia ireo no iray amin'ireo antony nahatonga ahy hanao tatoazy azy.
Na izany aza, Ny tatoazy trondro koi dia mety manana tandindona sy dikany hafa arakaraka ny loko sy ny endrika izay nanaovana tatoazy azy. Azontsika atao ny mamintina azy ireo amin'ireto karazana manaraka ireto:
Trondro Koi Mainty: Amin'ny tranga voalohany dia hitantsika fa mainty ny loko. Ny tonaly izay, na dia tsy taratry ny tena hatsaran-tarehin'ireto trondro ireto aza, dia ampy hihoarana ny hoditra amin'ny tena zava-misy. Ny loko mainty dia ampiasaina hanehoana ny fahaizana miatrika zava-tsarotra samihafa eny an-dalana. Amin'ny fampiasana ny fitoviana amin'ny tantaran'ny trondro koi, dia niresaka momba ny heriny handresena sy hiakarana amin'ny riandrano izahay. Misy tanjona amin'ny fiainana misy tanjona sarotra, nefa tsy azo atao.
Trondro Koi Manga: Etsy ankilany, manana ny trondro koi misy loko lehibe manga isika. Ny feo manga dia ampiasaina hanehoana ny fiterahana na hanaitra ny zanak'ilay fianakaviana. Azontsika atao koa ny manondro azy ho mitovy dika amin'ny fandriampahalemana sy ny fialan-tsasatra. Amin'izany fomba izany, ny tatoazy trondro koi amin'ny manga dia mety raha hiresaka zaza na fianakavianay.
Trondro Koi Mena: Ary farany manana ny trondro koi amin'ny mena izahay. Ny mena dia entina hanehoana ny fitiavana na ny tanjaka azon'ny zanak'olombelona iharan'ny karazan'aretina rehetra amin'ny fiainana. Amin'ity tranga ity, amin'ny koi dia hampiasaina hanasongadinana fa afaka miaina anaty rano miaraka amin'ny onja ratsy na marokoroko loatra izy.
Amin'ireo loko telo voalaza etsy ambony, ny iray izay manan-danja indrindra amin'ireo kolontsaina aziatika samihafa dia ny mena (indrindra any Japon). Raha izany, raha manana fisalasalana ianao, amin'ny tranga manokana misy ahy dia manana trondro koi mainty misy tombokavatsa amin'ny antsipiriany mena sy fotsy.
Atambaro ny tatoazy trondro koi amin'ny singa hafa na mamorona endrika
Ny hatsaran-tarehy sy ny fomba ahafahan'ny tattoo koi manao tombokavatsa dia samy hafa tokoa ka ny fahafaha-mamorona tatoazy manokana dia saika tsy misy farany.. Ary tsy noho ny trondro ihany, fa noho ny safidy samihafa izay tsy maintsy ampifangarointsika amin'ny singa hafa izay miresaka ny kolontsaina sinoa na japoney. Izany no antony mahazatra ny mahita tombokavatan'ny trondro koi miaraka amin'ireo singa hafa toa izany toy ny voninkazo lotus.
Iray amin'ireo tandindona lehibe any Azia noho ny hatsaran'ireo voninkazo ireo izay maniry amin'ny faritra feno fotaka sy fotaka. Izany no mahatonga azy ireo ekena tokoa rehefa mampiseho fa ny hatsarana dia afaka mipoitra na aiza na aiza. Maneho ny finiavana sy ny ezaka hamirapiratra na eo aza ny tontolo manjombona sy maizina.
Amin'ny toerana farany, Te hampisongadina ihany koa aho fa safidy iray hafa mahaliana ny manao tombokavatsa trondro koi dia ny manahafana ny endrik'ilay ying-yang. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manao tatoazy trondro roa isika. Noho izany, azontsika atao koa ny manondro ny iray ny filozofia tranainy indrindra avy amin'ny lafivalon'i Azia. Marika iray izay nihalehibean'ny maro amintsika izay nifandray bebe kokoa na latsaka. Ny tatoazy trondro koi roa maka tahaka an'io tandindona io dia natao hanehoana ny fahamarinan-toetra.
Koi Fish Tattoo Photos
Etsy ambany no hahitanao fanangonana be dia be an'ny Tatoazy Koi Fish amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana ary miaraka amina endrika isan-karazany hahafahanao mahazo hevitra manao tatoazy anao.
Tatoazy trondro: fanoharana momba ny famoronana sy ny fivoarana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Tatoa trondro Koi: dikany, tantara ary galeriana
Melissa dia hoy izy:
Dikany mahafinaritra !!! Nahatonga ahy te-hahazo iray!
Valiny tamin'i Melisa
Raha tena mahafatifaty izany no antony tiako anaovana tatoazy ny tenako
Jesus Fraczinet dia hoy izy:
Betsaka ny olona mahazo tombokavatsa ... tsy fantatra izay tena dikan'ny andalana sy ny lokony ... Trondro Koi, na dia avy amin'ny kolontsaina hafa aza izany ... ... ny filozofia ... ny fahatsarany tsara sy mampihetsi-po .. . ... mampirehareha ahy amin'ny sandriko rehetra… Tonga amin'ny tampon'ny soroko aho .. ..amin'ny fiainana… .aaay iza no mieritreritra fa tsipika poakaty fotsiny izy ireo ary tsy misy dikany …… fa zavatra betsaka io…. ny hoditra… .ary ny nofo… ary ny sooo… fa tena ao anaty ny fo sy ambonin'ny fanahy sy ny fanahy… ..Vanja sy ny sorona…. ny hatsaram-panahin'ny mpitondra… ..tsy misy fisalasalana… .ny zavatra ataony…. ary manatsara anao…. Fiarahabana avy any Santiago .. avy any Chile… .Fahatanjahana …… ary fitahiana….
Mamaly an'i Jesús Fraczinet
Carol dia hoy izy:
Salama, te hanampy ahy hahafantatra izany aho ... inona izany koi
Valiny tamin'i Carol
Manindrona mamirapiratra ao anaty haizina
Tatoazy amin'ny famantaranandro: fanangonana endrika sy hevitra